Khatar ma tahay in karantiil laga reebo safarka illaa 72 saacadood?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Khatar ma tahay in karantiil laga reebo safarka illaa 72 saacadood?
Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Wakaaladda Badbaadada Duulimaadka ee Midowga Yurub (EASA) iyo Xarunta Kahortagga iyo Kahortagga Cudurrada Yurub (ECDC) ayaa isku bahaystay inay ku baaqaan in laga dhaafo karantiilidda safarka wax ka yar 72 saacadood. Golaha Safarka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) wuxuu rumeysan yahay in tallaabadaas oo kale ay astaan ​​u noqon karto soo noqoshada safarka ganacsiga caalamiga ah iyo inay siiso koror dhaqaale oo weyn.
Soo-jeedinta ayaa sidoo kale waxaa ku jira daraasad firfircoon oo ay sameysay dowladda UK, sida lagu sheegay Warbixinta Taskforce ee Global Travel Taskforce, oo WTTC ay qayb weyn ka tahay, oo loo diyaariyey Waaxda Gaadiidka.
WTTC waxay ku raacsan tahay EASA / ECDC kuwaas oo ugu baaqey dadka socotada ah in aan si otomaatig ah loogu tixgelin inay yihiin halista sare ee suurtogalka ah in lagu faafiyo cudurka.
Si kastaba ha noqotee, talooyinka ayaa gaagaaban maadaama aysan wax ka qabanaynin beddelka karantiillada nidaamka tijaabada marka la baxayo, iyadoo karantiillada ay waxyeello aan la soo koobi karin u geysaneyso waaxda socdaalka & Dalxiiska adduunka ee horayba u halgameysay.
Gloria Guevara, Madaxweynaha & Agaasimaha Guud ee WTTC, ayaa tiri: “Soo nooleynta safarka ganacsiga caalamiga ah waxay muhiim u tahay bilowga soo kabashada dhaqaalaha adduunka, sidii sanadkii hore, safarada ganacsiga caalamiga ah ee soo gala Yurub oo dhan waxaa lagu qiyaasay US $ 111.3 billion (€ 99.8 billion), halka adduunka oo dhan uu yahay. oo lagu qiyaasay in ka badan US $ 272 bilyan.
“EASA / ECDC waxay soo jeedisay tilmaamo ka reebaya rakaabka karantiilka safarka 72 saacadood ama ka yar waxay noqon doontaa talaabo muhiim ah oo loo qaaday jihada ku wajahan soo nooleynta jumlada ee safarka ganacsiga.
"Airlines, hudheelada iyo kaabayaasha ganacsi ee baaxadda leh ee ku dhex jira waaxda socdaalka & Dalxiiska, dhammaantood waxay si weyn ugu tiirsan yihiin safarka ganacsiga. Khasaaraha safarka ganacsi ee caalamiga ah ayaa ka dhigaya shirkadaha diyaaradaha inay si gaar ah u soo shaac baxaan, gaar ahaan waddooyinka gaagaaban ee gaagaaban iyo kuwa transatlantic, oo iyagu ku tiirsan inta badan faa'iidadooda.
"In kasta oo aan soo dhaweyneyno dhammaan dadaallada horseedi kara soo nooleynta safarka caalamiga ah, waxaan rajeyneynaa in aan ka dhaadhicino EASA iyo ECDC in ay diiradda saaraan baaritaanka marka ay baxayaan, halkii ay ka ahaan lahaayeen barta laga soo galo, si loo yareeyo suurtagalnimada in la isugu gudbiyo diyaaradaha iyo yaree caqabadaha aan loo baahnayn ee safarka.
“Tallaabooyinkani waxay gacan ka geysan doonaan xaqiijinta dib-u-soo nooleynta muddada-dheer ee waaxda socdaalka & Dalxiiska, taas oo, sida ku xusan Warbixinta Saameynta Dhaqaalaha ee WTTC ee 2020, intii lagu jiray 2019, ay mas'uul ka ahayd 10-kii shaqoba mid ka mid ah (330 milyan oo wadar ah), waxayna sameysay 10.3% wax ku biirinta wax soosaarka guud ee adduunka waxaana soo saaray afartii midba dhammaan shaqooyinka cusub. ”
Tilmaamaha ka soo baxay EASA / ECDC waxay tixgeliyeen yareynta suurtagalnimada infekshinka kuwa safraya muddooyinka gaaban (yacni kuwa rajaynaya inay kusoo laabtaan 72 saac gudahood ama wax ka yar) iyo halka xiriirka dadka deegaanka uu xadidan yahay lagana fogaado wax isdhexgal bulsho ah.
Waxay soo jeedinaysaa safrayaasha noocan oo kale ah in aan lagu dhicin karantiillo iyo / ama baaritaanka COVID-19 ilaa ay ka muujiyaan astaamaha cudurka. Si kastaba ha noqotee, waxay sii waday inay kugula talinayso dhammaan dadka safraya inay wali hubiyaan inay u hoggaansamayaan xeerarka kala fogaynta bulshada ee maxalliga ah, si ay u ilaashadaan naftooda iyo kuwa kale ee ku hareeraysan, wakhti kasta.
Xarunta Xakamaynta Cudurada CD (CDC) waxay ku sheegaysaa boggeeda internetka in safarku kordhin karo fursadda faafitaanka iyo qaadashada COVID-19. Maaha in waqtiga safarka oo gaaban uu saameyn togan ku leeyahay natiijadan ka dhalan karta.
CDC-da waxay soo xiganeysaa su'aalahan muhiimka ah si aad isuweydiiso kahor intaadan safarka tixgelin
Ma tahay, qof ka tirsan reerkaaga, ama qof aad booqan doontid oo aad ugu jirto halista sii kordheysa ee aad ugu bukooto COVID-19?
Dacwadaha ma yihiin kuwo sare ama ku sii kordhaya bulshadaada ama meesha aad u socoto?
Isbitaalada bulshadaada ama meesha aad u socotaa miyay buux dhaafiyeen bukaanno qaba COVID-19?
Gurigaaga ama meesha aad ku socoto ma leedahay shuruudo ama xaddidaadyo dadka safraya?
Intii lagu jiray 14 maalmood ka hor safarkaaga, adiga ama kuwa aad booqanaysid xiriir dhaw miyaad la yeelatay dad aysan la noolayn?
Waxqabadyada soo socdaa waxay safrayaasha gelin karaan khatar sare COVID-19 - dhammaantoodna waxaa lagu sameyn karaa 72 saacadood gudahood:
U aadida kulan bulsheed weyn sida aroos, aas, ama xaflad.
Kaqeybgalka kulan ballaaran sida dhacdo isboorti, riwaayado, ama parade.
Inaad ku dhexjirto dad badan sida makhaayadaha, baararka, xarumaha jimicsiga, ama tiyaatarada filimada.
Ahaanshaha tareennada, basaska, garoomada diyaaradaha, ama isticmaalka gaadiidka dadweynaha. Ku safridda markab dalxiis ama doon webi.
Ugu dambeyntiina, CDC-du waxay isweydiineysaa inaad isweydiiso haddii qorshayaashaadu ay ku jiraan ku safridda bas, tareen, ama hawo taas oo ka dhigaysa sii joogitaanka 6 fuudh oo dhib ah? Miyaad la safri doontaa dad aan kula deganayn?
Haddii jawaabta mid ka mid ah su'aalahan ay tahay "haa," CDC waxay ku talineysaa sameynta qorshooyin kale, sida daahinta safarka.